ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ - ခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ် ဆောင်းပါးများ အတွဲ (၂)
Dr Lun Swe Khitpyaing Articles Vol2(2!8!2011)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 9:22 PM0comments
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၄-၇-၀၉)
- ဘန်ကီမွန်းခရီးစဉ် ထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှု မရှိ click
- မြန်မာခရီးစဉ် ဘန်ကီမွန်း စိတ်ပျက် click
- ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ခွင့် ငြင်းပယ်ခံရ (ဗွီဒီယိုအထူးသတင်း) click
- ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် တောင်းဆိုချက် စစ်အစိုးရ ငြင်းပယ် click
- မစ္စတာဘန်ကီမွန်းခရီးစဉ်အပေါ် သူတို့အမြင် click
- မစ္စတာဘန်ကီမွန်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့် ထပ်မံတွေ့ဆုံမည် click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မတွေ့ရဘဲ ဘန်ကီမွန်း မြန်မာပြည်ကနေ ပြန်ပြီ click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မတွေ့ရဘဲ ဘန်ကီမွန်း မြန်မာပြည်ကနေ ပြန်ခဲ့ရ click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဘန်ကီမွန်းက စစ်ဗိုလ်ချုပ်များကို အပြစ်တင် click
- ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း၏ခရီးစဉ် ပြီးဆုံး click
- ၀ နှင့် မိုင်းလားဒေသသို့ တပ်မတော်အရာရှိများ သွားနေတော့မည်ဟု တြိဂံတိုင်းမှူး ပြော click
- ပြီးခဲ့သည့်လက ထိုးစစ်တွင် သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရသူ DKBA ကရင် တပ်ဖွဲ့ဝင် (၂၅၀) ကျော်ရှိ click
- ပဲခူးမှာ ကလေးသူငယ်များ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဖြစ်ပွား click
- မြောက်ကိုရီးယား ရန်စမှုကို တောင်ကိုရီးယား တုံ့ပြန်ရန်အသင့် click
- စိန်ခေါ်မှုတွေ အမေရိကန် ရင်ဆိုင်နေရဆဲ click
- Weekly Eleven က RFA နှင့် မဇ္ဈိမကို တိုက်ခိုက် click
- နာမည်ကျော် စာရေးဆရာမ လွန်းထားထား သမီး မွေးနေ့အတွက် ဆွမ်းကပ် click
- UN chief chides Myanmar click
- Scant results for Ban in Burma click
- 5,000 days in captivity: The world's most famous political prisoner andadismal landmark click
- UN chief fails to meet Suu Kyi click
- Brown attacks Burmese leaders click
- Burma junta blocks Ban Ki Moon’s meeting with Aung San Suu Kyi click
- North Korea tunnellers fortify Burma junta click
- Overnight in ‘ghost town’ capital click
- UN chief leaves Myanmar 'disappointed' with junta click
- UK threatens new Burma sanctions click
- Brown raises prospect of more Myanmar sanctions click
- Ban Ki-moon's Speech click
- Burma court accepts appeal over witness ban from Suu Kyi's lawyers click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် တွေ့ခွင့်မရ၊ တွေ့ခွင့်ပေးရန် စစ်အစိုးရ ငြင်းဆို click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ခွင့်မရဘဲ ဘန်ကီမွန်း ပြန်ရတော့မည် (ဓာတ်ပုံသတင်း) click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ခွင့်ရဖို့ ဘန်ကီမွန်း စောင့်နေဆဲ click
- ဘန်ကီမွန်းက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးနှင့် ထပ်တွေ့မည် click
- ကုလအကြီးအကဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ခွင့်မရ click
- ဘန်ကီမွန်းခရီးစဉ် မြန်မာလူထု စိတ်ဝင်စား click
- ဘန်ကီမွန်းခရီးစဉ် အကျိုးရလဒ်မရှိဟု လေ့လာသူများပြော click
- ထိုင်းမှာ တုပ်ကွေးနဲ့သေတာ (၅) ယောက်ရှိပြီ click
- တုပ်ကွေးသတင်းလိုက်သူ သတင်းထောက် ဆေးရုံပို့ခံရ click
- အသက်မပြည့်သေးသည့် မိန်းကလေးကို အဓမ္မကျူးလွန်ပြီး လက်ထပ်ပေးရန် အာဏာပိုင်နှင့် ပူးပေါင်းလုပ် ဆောင်နေ click
- ကလေးငယ်နှစ်ဦး စစ်တပ်ထဲရောက်နေကြောင်း ရပ်ကွက်လူကြီးက ပြောမှ မိဘများသိရ click
- “အသံညီပြီး အလုပ်တူဖို့” အတွက် “အမြင်တူပြီး အတွေးညီကြပါစို့” (ဆောင်းပါး) click
- U.N.'s Ban denied Suu Kyi meeting click
- Ban Ki-moon presses Burma's leader to free Aung San Suu Kyi click
- Support Suu Kyi: U2 to fans click
- U.N. chief to meet Thai PM after Myanmar visit click
- Myanmar denies U.N. chiefavisit with Suu Kyi click
- Burma's Frustrated Generation Looks Abroad click
- Ban holds second meeting with Myanmar junta chief: officials click
- Ban Ki-moon 'deeply disappointed' at rejection of Aung San Suu Kyi visit request click
- Myanmar junta snubs United Nations secretary-general click
- Community rehab renews life of drug addicts in border village click
- Weekly Business Roundup (July 4, 2009) click
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 6:20 PM0comments
ဂျူလိုင် ဒိုင်ယာရီများ (ကဗျာ)
ကတိတလုံး၊ သွေးနဲ့ ထုံးနှောင်
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 6:09 PM0comments
လျှို့ဝှက်စွာ စီးဆင်းသွားတဲ့ မြစ် (ကဗျာ)
လျှို့ဝှက်စွာ စီးဆင်းသွားတဲ့ မြစ်
မတောက်နိုင်သေးတဲ့ မီးကို မွေးရင်းမွေးရင်းက
သွားဖုံးကြိတ်ဒဏ်ရာတွေက သွေးစိမ်းရှင်ရှင် …။
ဘယ်ကိုမှ ထွက်ပြေးမရနိုင်ပါဘူးကွာ ... တဲ့
အဲဒါ ရှင်ပြောနေကျ စကားလေ။
လှေငယ်ကလေးနဲ့ အိမ်ဦးရဲ့ အရှင်သခင်ရေ
ဘ၀အပေါ် လက်နက်မချဘူးဆိုတာ ...။ ။
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 6:03 PM0comments
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၃-၇-၀၉)
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် တွေ့ဆုံဖို့ စစ်အစိုးရ ခွင့်မပြု click
- ဘန်ကီမွန်းနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး တွေ့ဆုံ click
- ဘန်ကီမွန်းခရီးစဉ်အတွင်း ရလဒ်ကောင်း ထွက်ဖို့လို click
- ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ တွေ့ဆုံ click
- ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ခွင့် စောင့်နေဆဲ (ဗွီဒီယိုအထူးသတင်း) click
- မစ္စတာဘန် ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ သူတို့အတွေး သူတို့အမြင် click
- မြောက်ကိုရီးယား ဒုံးပျံစမ်းသပ်မှုတွေ ထပ်မံပြုလုပ် click
- ဂမ်ဘာရီခရီးစဉ်က ဘာတွေမျှော်လင့်နိုင်မလဲ (တိုက်ရိုက်လေလှိုင်း) click
- မြောက်ကိုရီးယားသင်္ဘောတစ်စီး ဆန်တင်ရန် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းသို့ ရောက်ရှိလာ click
- မန္တလေးပရိသတ် ထောင်ချီ၍ MNL ဗိုလ်လုပွဲသို့ သွားရောက်အားပေးမည် click
- အမ်းအနီး ခရီးသည်တင်ဘတ်စ်ကား တိမ်းမှောက်၊ တဦးသေ အများအပြား ဒဏ်ရာရ click
UN chief in Myanmar meeting
- UN chief fails to see Suu Kyi click
- Myanmar Muddle click
- UN's Ban Ki-moon under fire for praising Burma leaders click
- UK's Brown urges Myanmar to halt Suu Kyi trial click
- Myanmar stalls on UN chief's talks with Suu Kyi click
- Myanmar's frustrated generation looks abroad click
- U.N. Chief´s visit in Myanmar: How effective it will be? click
- UN Chief Asks Burmese Junta for Meeting with Aung San Suu Kyi click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဘန်ကီမွန်းကို တွေ့ခွင့်မပေး click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် တွေ့ဆုံဖို့ စစ်အစိုးရ ခွင့်မပြု click
- ဘန်ကီမွန်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ခွင့်မရ click
- ဘန်ကီမွန်းခရီးစဉ် လုံခြုံရေးများ အထူးတင်းကြပ် click
- ဘန်ကီမွန်း မြန်မာပြည် ဒီကနေ့ရောက်မည် click
- ဘန်ကီမွန်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ခွင့်ရမရ မသေချာသေး click
- မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်သည် ခက်ခဲသည့် ခရီးစဉ်ဟု ဘန်ကီမွန်း ပြောဆို click
- နအဖကို ပိုမိုဖိအားပေးရန် ဘန်ကီမွန်း တိုက်တွန်းတောင်းဆို click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှု ထပ်မံရုံးချိန်း click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တရားခွင် ရွှေ့ဆိုင်း click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သက်သေကို ရုံးချိန်းထပ်မံရွှေ့ဆိုင်း click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရုပ်ပုံ အင်ဒိုနီးရှားရှိ ဗြိတိန်သံရုံးတွင် ပြသထား click
- ဂျကာတာမြို့ ဗြိတိန်သံရုံး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဂုဏ်ပြု click
- အင်းစိန်ထောင်ပတ်ဝန်းကျင် လုံခြုံရေးထူထပ်စွာချထား click
- စစ်အစိုးရနှင့်ပတ်သက်သည့် မြောက်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ အမေရိကန် အရေးယူ click
- စစ်အုပ်စု တူးနေသည့် မိုက်တွင်းများ (သတင်းသုံးသပ်ချက်) click
- မြောက်ကိုရီးယားနှင့် မြန်မာ ဆက်ဆံရေးနီးစပ်လာမှု စိုးရိမ်ဖွယ် click
- လွှတ်တော်အမတ် ခန့်အပ်ပေးရန် ကချင်ပြည် ဒီမိုကရေစီသစ်တပ်မတော် တောင်းဆို click
- နယ်ခြားစောင့်တပ်ပြောင်းရေး အပစ်အခတ်ရပ်အဖွဲ့တွေ ထပ်မံဆွေးနွေး click
- စစ်သင်တန်းတက်ရန် ရွာသားများကို ခွဲတမ်းစနစ်ဖြင့် ခေါ်ယူနေ click
- ခန္တီးထောင်အတွင်းမှ အကျဉ်းသားအားလုံးနီးပါ ငှက်ဖျားရောဂါများ ဖြစ်ပွားနေ click
- ထူးဆန်းသည့် ရောဂါတမျိုးကြောင့် စိုက်ပျိုးထားသည့်စပါးများ ပျက်ဆီးနေ click
- မော်လမြိုင်ဈေးသစ် မပြီးသေး၍ ဈေးသည်များ ရောင်းချမှုကျဆင်း click
- တာလီဘန်တွေအပေါ် အမေရိကန်ထိုးစစ်သစ် စတင် click
- ရေနံစိမ်းအိတ်ပျောက်မှု အပြစ်မဲ့သူ (၄) ဦး ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံရ click
- စမုန်ညင်းထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွင် ဆူပူမှုဖြစ်၊ မျက်ရည်ယိုဗုံးသုံး၍ ဒဏ်ရာရသူရှိ click
- မုန်တိုင်းသင့်ဒေသတွင် ပညာရေးအတွက် အရေးပေါ်အကူအညီ လိုအပ်နေဆဲ click
- မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ရဲ့ နောက်ဆုံးဗွီဒီယိုအကြောင်းနှင့် နောက်ဆုံးဖြစ်စဉ်များ click
- မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ရဲ့ နောက်ဆုံးကကွက်တကွက် click
- ကာတွန်းဆရာကြီး ဦးဖေသိန်းရဲ့ ဟောပြောပွဲ click
- နယူးယောက်မြို့ လမ်းတခုပေါ်က ဈေးရောင်းပွဲ (ဓာတ်ပုံသတင်း) click
- အလှူမင်္ဂလာပွဲသတင်းနှင့် လှုပ်ရှားမှုသတင်းများ click
- နှစ်ပေါင်း (၂၀၀) ကျော် အဖြေရှာမရခဲ့တဲ့ စာဝှက်တစောင် (ဆောင်းပါး) click
- နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းအဖွဲ့ (၁၃) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမှ အဖွဲ့ဝင်သစ် ထပ်မံလက်ခံ click
- သောကြာစကားဝိုင်း (ဇူလိုင် ၃၊ ၂၀၀၉) click
- ခေတ်ပြိုင်အားကစား click
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၏ ဆင့်ကဲ … ဆင့်ကဲ … ဆင့်ကဲ … (ကာတွန်း ဟန်လေး - ဧရာဝတီဝက်ဘ်ဆိုက်)
- Ban meets junta chief click
- UN chief asks to see Aung San Suu Kyi click
- Burma Rejects Initial U.N. Attempt to See Suu Kyi click
- UN chief gambles on Burma breakthrough click
- UN Chief Denied Suu Kyi Visit click
- UN chief presses Suu Kyi release click
- Junta Itself is Main ‘Sanction’ on Burma: Expert click
- UN chief wants access to Suu Kyi click
- Suu Kyi trial postponed as U.N. chief arrives click
- Suu Kyi Image Lights up Central Jakarta click
- Sarah Brown calls for release of Aung San Suu Kyi click
- NLD Delegation Travels to Naypyidaw to Meet Ban Ki-moon click
- INGOs Kept Waiting for Visas click
- Missing the point on Myanmar click
- Strength and dishonor click
- Myanmar fossil may shed light on evolution click
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 8:43 PM0comments
အာဇာနည်ဗိမာန် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်း (သို့) တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ ချွန်ဒူးဝှမ်ကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရန် ကြိုးစားမှု (၁၉၈၃၊ အောက်တိုဘာ ၉ ရက်)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 4:33 AM 1 comments
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂-၇-၀၉)
- အန်န်အယ်လ်ဒီအပါအ၀င် နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ ဘန်ကီမွန်း တွေ့မည် click
- အန်အယ်လ်ဒီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် (၄) ဦးနှင့် ဘန်ကီမွန်း တွေ့ဆုံမည် click
- ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ခရီး မျှော်လင့်ချက်ရှိလား (မျက်မှောက်ရေးရာ) click
- ကုလအတွင်းရေးမှူးချူပ် မြန်မာပြည်ခရီးစဉ် အောင်မြင်ရန် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးဟု AAPPB ပြော click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမြန်လွတ်မြောက်ရေး အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များ တောင်းဆို click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမှုသတင်း အပြည့်အစုံ click
- မြောက်ကိုရီးယားတို့ ရန်ကုန်တွင် ဗုံးဖောက်ခွဲခဲ့မှု မှတ်တမ်းဗီဒီယို အင်တာနက်တွင် ထွက်ပေါ် click
- ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၏ စတိုင်သစ် click
- ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်း၏ မြောက်ကိုရီးယားလျှို့ဝှက်ခရီး (၃) click
- ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာလုပ်သားများ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံနေရ click
- ခန္တီးထောင်ရှိ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ငှက်ဖျားဒဏ်ခံနေရ click
- မြောက်ကိုရီးယားက တာတိုပစ် ဒုံးလက်နက် စမ်းသပ် click
- ၀က်တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ် ကူးစက်မှု သတိထားဖွယ် click
- နိုးတ၀က်အိပ်ခြင်း အိပ်မက်နဲ့ ဖန်တီးဥာဏ်စွမ်းရည် click
- ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် click
- အမေရိကန်စစ်ဆင်ရေးကြီး ဘယ်လောက်အရေးပါသလဲ click
- ပါဝါ ၅၄ ရဲ့ ၆၄ ပါဝါ အမည်ဖြင့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများရဲ့ ကဗျာစာအုပ်၊ ကာတွန်း(ဦး)ဖေသိန်း ကွယ် လွန်ခြင်း အမှတ်တရ စာအုပ်ငယ် click
- ကာတွန်း(ဦး)ဖေသိန်း ဟောပြောချက်များ - အပိုင်း (၁) click
- ဘယ်သူတွေက ဘယ်သူတွေကို ထိပ်တိုက်တွေ့နေကြတာလဲ (ဆောင်းပါး) click
- Ban's Burma trip draws hope, scepticism click
- UN chief Ban Ki-moon meets PM Lee at Istana click
- Pitting Karen against Karen inabloody war click
- Migrant fishermen fall through cracks in Thailand trafficking laws click
- Refugees trigger fears of human trafficking click
- ASEAN stresses importance of wider involvement from line ministries in implementing Post-Nargis recovery in Myanmar click
- Burmese Exiles, Rights Groups Hold Hope for UN Chief's Visit click
- ဘန်ကီမွန်းခရီးစဉ်တွင် အန်အယ်လ်ဒီဗဟိုအမှုဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံမည် click
- ဘန်ကီမွန်းခရီးစဉ် စစ်အစိုးရ အသုံးချနိုင် click
- မြန်မာ့အရေး ဂျပန်အားပေးမှု ဘန်ကီမွန်း ကျေနပ် click
- ဘန်ကီမွန်းခရီးစဉ်အပေါ် NLD မျှော်လင့်ချက်မထား click
- စောင့်ကြည့်ရမည့် မစ္စတာဘန်ကီမွန်းခရီးစဉ် (သုံးသပ်ချက်) click
- တုပ်ကွေးရောဂါသည်များ အပြင်ဆေးခန်းနဲ့ ဆေးရုံက လက်မခံတော့ click
- ဝက်တုပ်ကွေးသတင်းယူသူ ထိန်းသိမ်းခံရ click
- လူတုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်ဆေး အမေရိကန်ဆေးကုမ္ပဏီ တွေ့ရှိ click
- ဒီကေဘီအေအင်အား (၂၀) ထိုင်းဘက်ခြမ်းသို့ ၀င်လာသဖြင့် ဒုက္ခသည်များ ထိတ်လန့် click
- ပျဉ်းမနားဘူတာကို နေပြည်တော်ဘူတာသစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့မည် click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှု ပြောင်းလဲနိုင်ဟု ရှေ့နေများပြော click
- ဓာတ်ပုံကမ်ပိန်းအတွက် နယ်အဖွဲ့ချုပ်က အဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုကို အကူအညီတောင်း click
- နအဖတပ်ရင်းမှူး၏ အမိန့် အပစ်ရပ်အဖွဲ့များ မလိုက်နာ click
- နယ်ခြားစောင့်တပ် ပြောင်းလဲရန် NDA-K လက်ခံ click
- ဒီဂျစ်တယ်ဖိုင်စနစ် စာပေစိစစ်ရေးအကျိုးအတွက်သာဖြစ် click
- ထိုင်းအစိုးရက အလုပ်သမားလက်မှတ်သစ် စလုပ်ပေးနေပြီ click
- အလုပ်ရှင်မရှိသဖြင့် အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်သူ နည်းပါး click
- မဟာချိုင်ဒေသ အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင် အစိုးရသတ်မှတ်နှုန်းထက် ပိုပေးနေရ click
- နအဖအတွက် တောခြောက်ပေးရာရောက်လိမ့်မယ် (ဆောင်းပါး) click
- သိမ်နံရံပေါ်မှ ဆရာတော်တပါး၏ ပုံရိပ် စိတ်ဝင်းစားသူများပြား click
- ရိုဟင်ဂျာ (၁၀၀၀) ခန့် အတင်းအကျပ် ပြောင်းရွှေ့ခံရ click
- မလေးတွင် ဆန္ဒပြ မြန်မာအကျဉ်းသားများ အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းခံရ click
- မလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းရှိ မြန်မာများ ဆန္ဒပြမှုဖြစ် click
- ပျဉ်ဘိုးကြီးကျေးရွာအုပ်စုရှိ မူလတန်းကျောင်းအချို့ ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေး click
- ဘောလုံးနှင့် လောင်းကစား ရန်ကုန်တွင် လူကြိုက်များ click
- ရေတပ်အကောက်ဂိတ် ငွေ (၇) သိန်းဖြင့် ပုဂ္ဂလိကလက်သို့ လွှဲပြောင်း click
- မြောက်ကိုရီးယားသင်္ဘော လာရာလမ်း ပြန်လှည့်ပြီ click
- မြောက်ကိုရီးယားရေပြင်အနီး သင်္ဘောမ၀င်ဖို့ သတိပေး click
- အာဖန်ဂန်မှာ အဓိကစစ်ဆင်ရေးကြီး စတင် click
- ၀န်ထမ်းတွေ ပြည်သူတွေကို ဘယ်လိုဆက်ဆံသင့်သလဲ (ဆွေးနွေးခန်း) click
- မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ရဲ့ သေတမ်းစာအကြောင်း အပါအ၀င် ပြောင်းလဲဖြစ်စဉ်များ click
- ခြောက်ကြိုးကဝေ ချစ်စမ်းမောင်နှင့် အင်တာဗျူး click
- Should Ban Ki-moon visit Burma? click
- US Ban Related to N Korea-Burma Arms Deal click
- China's rouge regimes play up click
- UK embassy to display giant Suu Kyi image click
- UN chief Ban warned over risky Myanmar visit click
- U.N.'s Ban to urge reforms in high-risk Myanmar visit click
- Free clinics and school supplies benefit nearly 2000 students in Myanmar click
- Ban Ki-moon Will Meet NLD Representatives click
- U.N. Mission To Nowhere click
- Is N.Korean Mystery ShipaTrap for Obama? click
- Burma visitatest of credibility for UN Sec-Gen click
- Fossils may question ancestry click
- Karen refugees to be shifted to another camp click
- Myanmar, Indonesian entrepreneurs to boost cooperation in trade, tourism click
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 6:40 PM0comments
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁-၇-၀၉)
- ထိုင်းကျန်းမားရေးဝန်ကြီးမှ မြန်မာအလုပ်သမားများကို ဝက်တုတ်ကွေး သတိပြုကြရန် မှာကြား click
- တကမ္ဘာလုံးမှာ ၀က်တုပ်ကွေးဖြစ်နေသူ ၇၀,၀၀၀ ကျော်ပြီ click
- ကျောင်းသားများ နှာခေါင်းစည်း မတပ်ရန် ရန်ကုန်တိုင်းရုံးမှ ညွှန်ကြား click
- ၀က်တုပ်ကွေးလူနာကို ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ ကြိုးစားသူ သတင်းထောက်ကို ထိန်းသိမ်း click
- ၀က်တုပ်ကွေးကြောင့် သေဆုံးသူမရှိသေးဟု ကျန်းမာရေးညွှန်ချုပ် ပြောကြား click
- ၀က်တုပ်ကွေး မသင်္ကာရသူများအား HIV ဝေဒနာရှင်များနှင့် တဆောင်တည်းထား click
- ၀က်တုပ်ကွေးကြောင့် ဆေးနှင့်အကာအကွယ်များ ရှားပါးပြတ်လပ် click
- (IOM) အဖွဲ့မှ အကူညီပေးနေသော (HIV/AIDS) ဝေဒနာသည်များ သေဆုံးမှုနှုန်းများလာ click
- ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်က မြန်မာပြည်ခရီး အချိန်ရွေးချယ်မှု အထူးသတိထား click
- ဘန်ကီမွန်း၏ ခရီးကို ဂျပန်က အပြည့်အ၀ထောက်ခံ click
- မြန်မာ့ပြည်တွင်းရေးအခြေအနေ ဂျပန်စိုးရိမ် click
- နအဖက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ထောင်ချနိုင်ရန် ကြံစည်သည်ဟု အေအေပီပီ ပြောကြား click
- မြောက်ကိုရီးယားသင်္ဘော နောက်ပြန်လှည့်ပုံရ click
- မြောက်ကိုရီးယားသင်္ဘော နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်သွား click
- ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်း၏ မြောက်ကိုရီးယားလျှို့ဝှက်ခရီး (၂) click
- နိုင်ငံခြားသားလုပ်သားများကို ထိုင်းအစိုးရက အလုပ်သမားကတ်အသစ် စတင်ထုတ်ပေး click
- မိဘများထံ ပြန်ပို့သည့် ကလေးငယ်တဦးကို တပ်က ပြန်ခေါ်သွား click
- နေပြည်တော်-မော်လမြိုင် မီးရထား တိုက်ရိုက်ပြေးဆွဲမည် click
- တတိယနိုင်ငံအခြေချ မြန်မာဒုက္ခသည် ၅၀,၀၀၀ ပြည့် click
- လူသားအစ အာရှက ဖြစ်မည်ဟုဆို click
- ဟောင်ကောင်မှာ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆန္ဒပြ click
- အမေရိကန်တပ်တွေ အီရတ်မြို့ပြတွေက ရုတ်သိမ်း (ဗွီဒီယိုသတင်း) click
- ယူအေအီးနိုင်ငံမှာ ထပ်စင် ဆက်နေဖို့ ခက်ပြီ click
- ထိုင်းအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီအကြီးအကဲ နေရာပြောင်းရွှေ့ခံရ click
- နောက်ထပ် လူထုအစည်းအဝေးပွဲကြီးလုပ်ဖို့ UDD စီမံနေ click
- တပ်ဘိုင်အရေးအခင်း စီရင်ဆုံးဖြတ်ချက် အကြိတ်အနယ်ပြိုင်ဆိုင် click
- သားနဲ့ မြား (၀တ္ထုတို) click
ကာတွန်း ဟန်လေး (မိုးမခ၀က်ဘ်ဆိုက်)
- Myanmar rally in Japan calls on UN chief to press junta click
- Rights Group: Burmese Generals Could Exploit UN Visit click
- Burma: Make Ban’s Visit Meaningful click
- Burmese Fossil Indicates Apes Arose in Asia, Not Africa click
- Listen to locals in Pagan, Burma click
- Moon unlikely to meet Suu Kyi click
- မြောက်ကိုရီးယားသင်္ဘော ပြည်တော်ပြန်ပြီလား click
- မြောက်ကိုရီးယားသင်္ဘော နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်နိုင်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ် click
- မြန်မာသို့ စစ်လက်နက်ရောင်းချရန် ကြိုးပမ်းသူ (၃) ဦးကို ဂျပန်ရဲက ဖမ်း click
- မိုင်းလား နှစ် (၂၀) ပြည့်ပွဲတော် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပ၊ တရုတ်ကောင်စစ်ဝန် တက်ရောက် click
- အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မတော် နှစ်ပတ်လည်နေ့တွင် နအဖတိုင်းမှူး မတက်ရောက် click
- ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာမည် click
- DKBA ဝင်တိုက်မည်ကို ဒုက္ခသည်များ စိုးရိမ် click
- ကရင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ နေရာသစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့မည် click
- အရှင်ဂမ္ဘီရ၏ အမှုလျှောက်လှဲချက်ကို ခရိုင်ရုံးက ပယ်ချ click
- လူတုပ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်ပျံ့နှံ့လာ၍ မြန်မာလူထု စိုးရိမ် click
- လူတုပ်ကွေးကူးစက်ခံရသူ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ကောင်းမွန် click
- နိုင်ငံခြားသွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများ သတ်မှတ်ဆေးခန်းများတွင်သာ ဆေးစစ်ရန် ညွှန်ကြား click
- လမ်းပြင်ပေးမည်ပြောပြီး ကြံ့ဖွံ့ထဲဝင်ခိုင်း click
- အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ် ခရီးသွားလာခွင့် မြန်မာစစ်တပ်က ပိတ်ပင် click
- မြန်မာ့ရိုးရာဝတ်စားဆင်ယင်မှုပြိုင်ပွဲအတွက် မောင်တော ခယကမှ လူထုထံမှ ငွေကောက်ခံ click
- ရဲ မေ့ကျန်သည့် ဗုံးကြောင့် အထိတ်တလန့်ဖြစ်ရ click
- အနုပညာမူပိုင်ခွင့် ဥပဒေမူကြမ်း စတင်ရေးဆွဲနေ click
- ဘန်ကီမွန်းခရီးစဉ်က အောင်မြင်မှုတွေ သယ်ဆောင်လာမလား (အင်တာဗျူး) click
- ပြည်သူမျက်ဖြူဆိုက်မှ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ ကြိုက်သည် (ဆောင်းပါး) click
- ၂၀၀၉ နိုင်ငံရေးစစ်တမ်း - (အပိုင်း ၄) (ဆောင်းပါး) click
- တရားမျှတမှုနှင့် တရားဥပဒေလေးစားမှု (အယ်ဒီတာ့အာဘော်) click
- ရှေ့တလှမ်းတိုး၊ နောက်နှစ်လှမ်းဆုတ် (ဆောင်းပါး) click
- မျက်နှာဖုံးတပ် ရန်ကုန် (ဆောင်းပါး) click
- အ၀ိဇ္ဇာနိုင်ငံ၊ အ၀ိဇ္ဇာမြို့နှင့် အ၀ိဇ္ဇာလူသားများ (စာအုပ်စင်ကဏ္ဍ) click
- နှလုံးရောဂါ (ထွေရာလေးပါး) click
- ပူနွေးနေတဲ့ မျက်ရည်များ (ဆောင်းပါး) click
- Ban Says He’ll Urge Junta to Free Suu Kyi click
- Ban Ki-moon plans to meet Aung Suu Kyi: Official click
- Early Man Evolved in Burma, Says Royal Society Study click
- Than Shwe Congratulates Iranian President Ahadinejad click
- North Korean ship under US scrutiny changes course click
- U2 URGE FANS TO JOIN POLITICAL FIGHT click
- Funding is urgently needed in the Delta to ensure quality education for all children click
- Myanmar mask prices soar after first swine flu case click
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 5:54 PM0comments
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 1:47 AM6comments
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 10:45 PM2comments
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၃၀-၆-၀၉)
- မစ္စတာဘန်ကီးမွန်း မြန်မာပြည်သွားမည် click
- ကုလမှူးချုပ် မြန်မာမသွားခင် ဂျပန်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်ပေးဖို့ ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် တောင်းဆို click
- ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ် အတိုက်အခံအင်အားစု ကြိုဆို click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်ပေးရေး ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် တောင်းဆို (ဗွီဒီယိုသတင်း) click
- မြန်မာ့အရေး ကုလသမဂ္ဂ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့နေများက နောက်ဆက်တွဲသက်သေ တင်ပြဖို့ရှိ click
- ဦးဂမ္ဘီရအမှုများကို အယူခံဝင်ရာ တရားရုံးက ပလပ် click
- မြောက်ကိုရီးယားသင်္ဘော နောက်ပြန်လှည့် click
- မြောက်ကိုရီးယားသင်္ဘော နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ကြောင်း သတင်းစာက ဖော်ပြ click
- ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်း၏ မြောက်ကိုရီးယားလျှို့ဝှက်ခရီး - အပိုင်း (၁) click
- ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရွှေမန်း၏ မြောက်ကိုရီးယားကို လျှို့ဝှက်သွားရောက်ခဲ့ click
- ဗိုလ်ချုပ်ရွှေမန်း မြောက်ကိုရီးယားခရီးစဉ် အစီရင်ခံစာနဲ့ ဓာတ်ပုံများ click
- ဒုံးလက်နက်နည်းပညာ မြန်မာနိုင်ငံတင်ပို့ဖို့ ကြံစည်သူ (၃) ဦး ဂျပန်ရဲက ဖမ်း click
- ဒုံးကျည်လုပ်ကရိယာ မြန်မာပြည်တင်ပို့သူများကို ရဲက ဖမ်းဆီး click
- ဘောလုံးပွဲကို မျက်နှာဖုံးဝတ်ပြီး အားပေး (ဓာတ်ပုံသတင်း) click
- ပါးစပ် နှာခေါင်းစည်း တပ်ဆင်သူ ရန်ကုန်တွင် ရုတ်တရက်များပြားလာ click
- A (H1N1) တုပ်ကွေး ကျောင်းတွင်းပညာပေးများ ရန်ကုန်တွင် ပြုလုပ် click
- A (H1N1) တုပ်ကွေးကာကွယ်ရေး နှာခေါင်းစည်းများ ပြတ်လပ် click
- NDAA တည်ထောင်ခြင်း နှစ် (၂၀) ပြည့် အခမ်းအနားကျင်းပ click
- ဗုံးကွဲပြီးနောက် သေနတ်ဒင်များကိုဆေးခြယ်ရန် နအဖမှ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များကို ညွှန်ကြား click
- ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့တော် စစ်တွေရှိ တပ်ရင်းများကို အရေးပေါ် ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန် click
- စစ်တွေတွင် ပြည်သူပိုင်လယ်မြေများအား စစ်တပ်မှ သိမ်း click
- အမေရိကန်ရောက် မြန်မာဒုက္ခသည် (၅၀၀၀၀) ပြည့် click
- တတိယနိုင်ငံတွင် အခြေချသူ မြန်မာဒုက္ခသည် (၅) သောင်းပြည့်ပြီ click
- ပလပ်စတစ်စွန့်ပစ်မှု ရန်ကုန်တွင် နေ့စဉ် တန် (၂၀၀) ခန့်ရှိ click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ အထိမ်အးမှတ် အိမ်ဖြူတော်ရှေ့ ဆန္ဒပြပွဲ (ဓာတ်ပုံသတင်း) click
- မိုးမခဖတ်ဖို့ အပြေးအလွှားသတင်းများ click
- အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာမှာ ခရီးသည်တင်လေယာဉ် ပျက်ကျ၊ ကလေးငယ်တဦး အသက်ရှင်ကျန်ရစ် click
- အီရန်အရေးအခင်းအပေါ် ရပ်တည်ချက်ပြတ်သားဖို့ သမ္မတ အိုဘားမားကို ရစ်ပတ်ဗလစ်ကန် ဝေဖန် click
- အမေရိကန်တပ်တွေ အဆုတ်နဲ့ အီရတ်ရဲ့ လုံခြုံရေး click
- မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်နဲ့ ဆက်စပ်သတင်းများ click
- နယူးဂျာစီပြည်နယ် လောကချမ်းသာစေတီတော် ဈေးရောင်းပွဲတော် (ဓာတ်ပုံသတင်း) click
- နယူးယောက်နဲ့ မေရီလဲန်း ဘောလုံးပွဲ (ဓာတ်ပုံသတင်း) click
- အင်္ဂလန်ခရီး မပြီးသေးပါး (၅) click
ကာတွန်း ဟန်လေး - မိုးမခ၀က်ဘ်ဆိုက်
- North Korean ship 'turned around' click
- UN secretary general planning to meet Aung San Suu Kyi click
- Ban Ki-Moon Wary Of Burmese Generals click
- Ban urges Myanmar, N.Korea click
- BURMA: U.N. Chief Comes Calling with Politics on His Mind click
- Burma 'Ready to Search N.Korean Ship' click
- N Korea-Burma link suspected click
- UN Chief Calls on Burma to Release Political Prisoners click
- Burmese women react to brutality with inspiring courage and dignity click
- U.N.'s Ban says to urge Myanmar to release Suu Kyi click
- 50,000th Myanmar Refugee Leaves Thailand For US click
- Second Chance | Burmese Monks click
- US is Destination for 50,000th Burmese Refugee click
- Myanmar special gem show attracts foreign traders click
- China Hong Kong trade fair seeks exhibitors from Myanmar click
- ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း မြန်မာနိုင်ငံသွားရောက်မည် click
- ဘန်ကီမွန်း မကြာမီ မြန်မာပြည်သို့သွားမည် click
- မြန်မာပြည်သို့ လက်နက်ပစ္စည်းတင်ပို့သည်ဟု ယူဆရသူ (၃) ဦး ဂျပန်တွင် အဖမ်းခံရ click
- မယ်လဒုက္ခသည်စခန်း ပြာပုံဖြစ်ရမည်ဟု ဒီကေဘီအေတပ်ဖွဲ့ ကြိမ်းဝါး click
- ရန်ကုန်မြို့တွင် နှာခေါင်းစည်းများ ဈေးတက် click
- “သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်ရှိမှ ရွေးကောက်ပွဲ တရားမျှတနိုင်မယ်” click
- တလအတွင်း မြန်မာ (၄၀၀၀) ထိုင်းတွင် အဖမ်းခံရ click
- စစ်အစိုးရ၏ သတ္တုတူးဖော်ရေးစီမံကိန်းကြောင့် အိုးအိမ် (၇၀၀၀) ကျော် ပျက်စီးဆုံးရှုံးကိန်းဆိုက် click
- ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာ ပပျောက်ရေး စီမံချက်ကြောင့် ဒေသခံများ အခက်တွေ့ click
- စံပြရွာသားများ နေအိမ်များကို စွန့်ခွာထွက်ပြေး click
- စစ်တပ်က အတင်းအကျပ် စစ်သင်တန်းတက်ခိုင်း click
- အပူလှိုင်းကြောင့် မြန်မာဒုက္ခသည်များ ရောဂါဝေဒနာများ ဖြစ်ပွား click
- မြစ်ကြီးနားလေယာဉ်ကွင်း တိုးချဲ့ရန် လူနေအိမ်အများအပြား ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းမည် click
- နမ့်ခမ်းမြို့တွင် ရဲအင်အား တိုးချဲ့ဖြည့်တင်းနေ click
- လူရွှင်တော်ဇာဂနာကို ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်ရ click
- ထိရောက်မြန်ဆန်သည့် သတင်းထုတ်ပြန်မှုမျိုး လိုအပ်နေ click
- မဟောသဓ မရှိတဲ့ သားတရားစီရင်ခန်း (ဆောင်းပါး) click
- အထိနာနေသော မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာ ဈေးကွက် (ဗွီဒီယိုသတင်း) click
- ထာဝရနုတ်ဆက်သွားသူ ပေါ့ပ်ဂီတဖန်ဆင်းရှင် မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် (ဗွီဒီယိုအထူးသတင်း) click
- UN chief in Japan ahead of Myanmar visit click
- U.N. boss to push Myanmar leadership on Suu Kyi click
- UN chief urged to meet Suu Kyi on Burma visit click
- No Hope for Suu Kyi from Ban’s Trip: NLD Leader click
- Japanese Police Block Suspected Missile Technology Exports for Burma click
- Thailand: Resettlement of Myanmar refugees hits 50,000 mark click
- Myanmar's first new flu patient recovers click
- New rules for musicians performing abroad click
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 6:27 PM 1 comments